Ukuphila, ukufa kanye nencazelo yokuphila komuntu
Ukuphila, ukufa kanye nencazelo yokuphila komuntu yizinkinga zefilosofi, ngoba akekho ongakwazi ukuchaza la mazwi kanye nezimo. Akekho ongakwazi ukufakazela ukuthi ukuphila noma ukufa kungakanani nokuthi yini ekhona. Ukufa kuyisabekayo futhi ngesikhathi esifanayo sidonsela leli gama, kuneziqu eziningi kulokho esingasoze saziqagela. Ungacabanga ngakho konke ukuphila kwakho, uzama ukuyiqonda futhi uyifake. Futhi ukuyixazulula kungenzeka kuphela emhlanganweni kanye nalo, futhi lapho sihlangene nokufa, silahlekelwa yimpilo, ngakho-ke ngokufa kuze kube manje akuyaziwa. Bangaki abantu abafa ukufa kuthatha njalo ihora, noma zonke izinsuku, inyanga, unyaka. Ukufa kufike kithi? Ukufa kufike kithi ngendlela yokuguga, noma ngesimo sezenzakalo zezulu, ngesimo sezingozi, noma njengommese ngemuva noma enhliziyweni. Ukufa kuhlukile, futhi ngukuphi uhlobo esikufanelekelayo, impilo yethu inquma indlela esiphila ngayo, inhlonipho noma ephansi.
Isidalwa, esinama-scythe nesigqoko esimnyama esinomkhuhlane ojulile, esihlanganisa ubuso, esiza umphefumulo wethu. Ubani yena kanye nesithunywa sakhe? Noma liyigunya elizimele, njengenkantolo, likhomba ukuthi ungathumelaphi umphefumulo, ezulwini noma esihogweni. Ungumhlanzi weMhlaba, ophikisa umuntu ngenxa yemfanelo yakhe noma amaphutha akhe. Uthatha imiphefumulo yabawile futhi iphakanyisiwe. Kufanele siphile kanjani ukuze ukufa kungasithathi masinyane?
Kusukela ekubukeni kwezokwelapha, udinga ukuhola indlela yokuphila enempilo, ukuzivocavoca, nokudla kahle. Futhi ingabe siqinisekisiwe ngokubhekene nezifo ezithathelwanayo ezingathatha ukuphila kwethu? Kusukela ekubukeni kwenkolo, banikeze impilo kwabanye, futhi impilo iyophiwa, usize umakhelwane wakho, futhi uNkulunkulu uzokusiza. Noma kungani ugijimela ekufeni? Ngokungazelelwe, ngakolunye uhlangothi lomfula, ohlukanisa ukuphila nokufa, ukufana kufana nokuphila, besaba ukuthi kuzofa. Lezi zinguquko ezimbili ezingafani, ngeke kube khona ukufa, bekungeke kube khona ukuphila. Zihlobene.
Futhi kuthiwani uma ukufa kungukuphila, kuphela okunye, njengoba nje ukuphila kungukufa? Futhi ukuthi uma ukufa ngesimo sokuphila kulula futhi kulula kunokuphila kwethu. Futhi sinamathele emiphilweni yethu njengehlazo lokugcina lamanzi bese sizama okungenani ihora, kodwa ukwelula izimpilo zethu futhi singaboni ukufa. Futhi kuthiwani uma imiphefumulo yethu yesono ijeziswa nje futhi ithwala isijeziso sayo ngesimo sokuphila, njengesiboshwa endaweni yokubusa okunzima. Phela, ukuphila ngezinye izikhathi kufana nokujeziswa, ngesimo sezinkinga zokuphila. Futhi kuthiwani uma izwe lethu liyisihogo, lapho imiphefumulo ejeziswe iya khona.
Ukufa kungukuqala kokuphila okusha, okunye okufakwe kithi, noma okulahlekile. Akuyona ize ukuthi inkulumo ethi "ukuphila emva kokufa" ibonakala. Futhi kuthiwani uma ukufa kungumnyango wokuphila okusha. Sesaba ukufa, futhi ukwesaba kuyinto ekhethekile kithi, ngoba sihlale sesaba okungaziwa. Kumelwe sisinde ekufeni, ukuze sibe nokuphila okuphakade. Sesaba ukufa, ngoba sikholelwa ukuthi sibukeka bethu. Sikholelwa ukuthi ngokufa, silahlekelwa ubuntu bethu nobuntu bethu. Sesaba ukulahlekelwa yilokho esilondolozile konke ukuphila kwethu ngomsebenzi oweqile, sesaba ukulahlekelwa yimfuyo yethu.
Futhi umzimba uyisiphephelo sendaba ephakeme, ebizwa ngokuthi umphefumulo. Umzimba uhamba njengezicathulo ngezikhathi ezithile, neminyaka yemvelo, kanti umphefumulo uhlale uhlala njalo, ubeka isijeziso sakho, ubuyela emhlabeni, ungene emzimbeni omusha, ngakho-ke iminyaka eyinkulungwane, kusukela emzimbeni kuya emzimbeni, ukhonza isikhathi kuze kube sekupheleni. Ukufa kusenesikhathi kusanda nje ukujezisa, ukukhulisa umusho, nokwandisa isikhathi sokukhonza ekoloni ukuphuma ejele. Futhi umphefumulo oye wakhonza isijeziso sakhe awusayikubuyela eMhlabeni, uhlala emzimbeni. Uthola ukuthula okuphelele.
Kwaphela izinkulungwane zeminyaka abantu bebelokhu bezama ukuhlukanisa incazelo yokuphila nokufa, kodwa nokho akekho okwazi ukunikeza incazelo yalezi zwi kanye nezimo. Kunezinguqulo eziningi zokufa ngokwezinkolo nesayensi, kodwa akukho lutho oluye lwafakazelwa.
Futhi siyini injongo yokuphila? Wonke umuntu okwazi ukucabanga uvame ukucabanga ngencazelo yalokho azalwa ngakho futhi aphile. Sonke siyingxenye yomjikelezo ophakeme, sizalwa, siphila, siyafa. Ukuphila kuhlale kunzima kakhulu kunabantu abaningi abakushoyo. Futhi lapho kwaziwa khona ukuthi kulula ukufa. Ngempela, kuphela oshonile ongasho lokhu, kodwa abafileyo abakhulumi.
Bakhuluma ngempilo nokufa emakhulwini eminyaka, futhi bayothi inombolo efanayo, ngoba into ephakeme futhi engatholakali kumuntu. Wonke umuntu ukhuluma ngokuphila nokufa, kusukela ekudume kunabo bonke abangenalwazi. Kodwa noma yikuphi okukhulunywa ngakho mayelana nokuphila nokufa, konke lokhu kuzohlala kungxoxwa nje, futhi lezi zenzakalo zizohlala ziyimigqa emikhulu yomhlaba wonke.
Ungalungisa kanjani i-currant emnyama yokwelapha?
I-Alaska i-pollack ku-cucumber-nut sauce
Isaladi "Insimbi Yegolide"
Amakhukhi kusuka kuma-chips amazambane
Kuthiwani uma ingane inezwi elihlabayo?